I-Apple ibhalisa ilungelo lomenzi wechiza lesazisi kwiscreen | Iindaba zeGajethi
URafa Rodríguez Ballesteros | | iapile, Iiselfowuni, Izaziso
Ukuphuhliswa kwetekhnoloji entsha ezenziwa kancinci kancinci zii-smartphones iyaqhubeka nokukhula. Kwaye nangona kwinqanaba labasebenzisi be-Android bekuyinkokeli iminyaka. I-Apple ayiyeki kwimizamo yayo yokwenza i-iPhone igqibe ngakumbi Inguqulelo emva kwenguqulelo. Into entsha ngaphandle kwamathandabuzo, kwaye ngokwabasebenzisi ngokwabo, mva nje iyabonakala ngokungabikho kwayo.
Ngaphandle kophuculo kwiprosesa, isoftware kunye nekhamera, Sele zikhona iinguqulelo ezininzi ze-iPhone ngaphandle kweendaba ezaziwayo. Izolo ngoLwesibini we-17 sikwazile oko ukusuka eCupertino patent enxulumene nokudityaniswa kweTouch ID kwiscreen ibhalisiwe. Kwaye nangona ingeyonto intsha, yinto enokufumana ukuphuculwa okuncinci kwiinguqulelo ze-iPhone ezizayo.
1 I-ID yobuso inokuhlala kunye ne-ID okokuqala ngqa
2 Ngaphantsi kwescreen somfundi weminwe kwi-iPhone elandelayo?
I-ID yobuso inokuhlala kunye ne-ID okokuqala ngqa
Ukusukela ukususwa kwi-iPhone ye iyabonakala kwaye iyintsomi iqhosha «ikhaya», Iinguqulelo ezivela kwi-iPhone X ukuyeka iteknoloji yokuqaphela iminwe. Inkqubo yokhuseleko esebenzayo, kwaye isebenza kakuhle kwi-iPhone 8 nasemva koko. Ngee-smartphones ezintsha zonke ezikrinini kwakungekho gumbi lokudibanisa isazisi sokuchukumisa.
Isigqibo sokususa umfundi weminwe asenzanga ukuba i-iPhone inganqabiseki. Endaweni yoko, kwaye oku ukuba ibingaphambi kwexesha, iinguqulelo ezintsha bezinokuba nazo Itekhnoloji yokuqonda ebusweni ebizwa ngokuba I-ID yobuso. Itekhnoloji esele ikho ephuculwe kakhulu yiApple ukuyenza "ingenzeki" yokuthintela. Ngaba kukho igama elikhuselekileyo nelilula ukukhumbula kunobuso bethu?
Inyani yile yokuba nangona I-ID yobuso ithande kakhulu, kwaye njengoko sisitsho ukuba ibiyinkqubela phambili enkulu, kukho abo bathi ukusuka kumzuzu wokuqala baphosile umfundi weminwe. Kwiimeko ezithile zokukhanya okuphantsi okanye kwethunzi, ukubonwa kobuso kunokusilela. Into engenzekiyo ngomfundi weminwe. Ke ngoko, iminyaka ethile, ukusukela U-Apple ebesebenza ekudibaniseni i-ID yescreen kwiscreen.
Ngaphantsi kwescreen somfundi weminwe kwi-iPhone elandelayo?
Sikwazile ukubona kule minyaka idlulileyo ukuba kanjani I-Apple "iboleka" itekhnoloji esele ikho kwaye iyiphucula ibe yeyayo. Umzekelo ocacileyo woku I-ID yobuso ngokwayo. Ukuqatshelwa kobuso kwakusele kusetyenziswa kwizixhobo ngaphambi kokuba iApple iphumeze kwi-iPhone X. Y ikwazile ukuyiphucula ingathathi nje ifoto yobuso bethu, kodwa ukwenza imephu epheleleyo yobuso bethu ukuya ku 180º x 180º.
Ngaba kuya kwenzeka okufanayo nge-ID yokuChukumisa eyakhelwe kwiscreen? Sibona ukuba okwangoku, izixhobo ezinje ngeSamsung S10 sele ziyifakile. Kwaye nangona kusebenza kakuhle, ukufundwa kukhawulelwe kwindawo ethile yesixhobo. Eminye imithombo ibanga oko i-iPhone elandelayo iya kuba nakho ukufunda iminwe yethu naphina kwiscreen. Ngapha koko, njengoko iApple ingazange ityhile idatha malunga nelungelo elilodwa lomenzi wechiza, kuya kufuneka silinde de i-iPhone 12 ibe yinyani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » iapile » I-Apple ibhalisa ilungelo lomenzi wechiza lesazisi kwiscreen
Uyifaka njani kwaye uyiqwalasele iKhaya likaGoogle